သီချင်းတွေရဲ့အမှန်တကယ်စွမ်းအားကတော့ ကောင်းစွာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်းပါပဲ။ သီချင်းတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်းဆုံးဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ links တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အလွန်အမင်းအကျိုးရှိအောင် စီမံနိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုပါ။ သီချင်းများနားထောင်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ရော ခန္ဓာကိုယ်ရောကိုပါ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပြေလျော့စေတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သီချင်းအငြိမ်လေးတွေ၊ သီချင်းအေးအေးလေးတွေက ပိုပြီး ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။
အဲလိုသီချင်းအေးလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာ
အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ သွေးခုန်နှုန်းကို နှေးစေတယ်၊
သွေးဖိအားကိုကျစေတယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
သီချင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေအောင် အသုံးပြုနိုင်မယ့်
သီချင်းတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စိတ်ရှု့ပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းတွေကိုလည်း
ဖြိုခွဲနိုင်အောင် ကူညီပေးပါသေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် တရားထိုင်နိုင်အောင်လည်း ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းနားထောင်တဲ့သီချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း အမျိုးမျိုးကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်ကဘယ်သီချင်းအမျိုးအစားကိုကြိုက်တာလဲ၊ ပြီးတော့
Classical သီချင်းအမျိုးအစားကို သင်နားထောင်နေကျမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ
သီချင်းအေးအေးလေးတွေက သင့်အတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လူတွေက အရမ်းစိတ်ဖိစီးနေတဲ့အခါ အရမ်းဆူညံတက်ကြွတဲ့သီချင်းမျိုးကို နားထောင်ဖို့ ရှောင်ရှားသင့်တာပါ။
အဲဒါက အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးပစ်နေမိသလို ခံစားရပြီး ဘာကိုမှလည်း အကျိုး ရရှိအောင်
ဒါပေမယ့် အဲဒါက အခြားသောနေရာတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့
အဲဒီလိုဆူညံတက်ကြွတဲ့သီချင်းမျိုးနားထောင်ခြင်းဖြင့် သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့ကျစေပြီး
ပြန်လည်တက်ကြွလာတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တာမှန်ပါတယ်။ အလုပ်တွေအရမ်းများတဲ့နေ့စဉ်ဘဝကို သီချင်းနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ကားထဲမှာ CD နဲ့သီချင်းဖွင့်ထားတာမျိုး ၊ ရေချိုးနေတုန်း ရေဒီယိုဖွင့်ထားတာမျိုး လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။သင့်ခွေးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ
စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါခံစားနေရတဲ့သူမျိုး ၊ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့သူမျိုးတွေကိုလည်း သီချင်းနားထောင်ခိုင်းခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့
ပြန်လည် တက်ကြွလာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သီချင်းတွေအော်ဟစ်သီဆိုပစ်လိုက်ခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့တင်းကြပ်မှုတွေကို နှင်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော extroverts (ဘွင်းဘွင်းသမား)များအတွက် ကာရာအိုကေသီဆိုခြင်းကလည်း အရမ်းကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းစေပါတယ်။
အိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်မှာ သီချင်းငြိမ်ငြိမ်လေးတွေနားထောင်ခြင်းဖြင့်လည်း သင့်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေပြီး ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေပါတယ်။
သီချင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နေမကောင်းတဲ့သူတွေကိုကုသဖို့ အသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထပ်တူကျအောင်ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သီချင်းနားထောင်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို
သီချင်းနားထောင်ခြင်းက ကလေးတွေ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ဆင်းရဲရခြင်းကိုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
	သီချင်းနားထောင်ခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေခြင်း၊ ညီညွတ်မှုကိုအားပေးခြင်းတို့ကြောင့် ဘဝရဲ့စွမ်းရည်တွေလည်း တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
	ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ လူနာတွေကို နားကြပ်ဖြင့်သီချင်းနားထောင်ခိုင်းပြီး သီချင်းနားမထောင်မှီနဲ့ နားထောင်ပြီးအခြေအနေတွေကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပူပန်မှုတွေကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ .
	သီချင်းနားထောင်ခြင်းက နာတာရှည်ရောဂါမှနာကျင်မှုတွေ နဲ့ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်နာကျင်မှုတွေ စသည်တို့ကြောင့် စိတ်ပူပန်မှုဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ခြင်းတို့ကို လျော့ကျအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။.
	အသက်ကြီးပိုင်းလူတွေမှာ သီချင်းနားထောင်ခြင်းကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျမှုလျော့ကျစေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ခင်မှုတိုးစေပါတယ်။
	အလုပ်တွေများခြင်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်းမျိုးမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း သင်ယူမှုစွမ်းရည်တိုးစေနိုင်ပါတယ်။
	သီချင်းဖြင့်ရောဂါကုထုံးနည်းက ကင်ဆာရောဂါသည်များကိုလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူပင်သောကများခြင်းကိုလျော့ကျစေတဲ့အပြင် နေ့စဉ်ဘဝရဲ့စွမ်းရည်တွေကို ပြန်လည်တိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ့တော့ ဘာမှသိပ်ပြီးထွေထွေထူးထူးတွေးတောမနေပါနဲ့တော့။ အရမ်းပင်ပန်းလာရင်၊ အရမ်းစိတ်ဖိစီးလာရင်၊ အရမ်းစိတ်ဓာတ်တွေကျလာရင် သီချင်းလေးတွေသာ ဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်တော့။
သီချင်းနားထောင်ခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဘဝက ဖိစီးမှုတွေ ပြေပျောက်နိုင်ပါစေ။#BAWA101